१६ वर्षीय किशोरीको सामूहिक बलात्कारपछि जिउँदै जलाएर हत्या !
बैशाख २५, २०७५ BNNTV
काठमाडौँ । भारतमा एक जना युवतीको सामुहिक बलात्कारी गरी जलाएर हत्या गरिएको छ। भारतको झरखण्ड चतरा भन्ने ठाउँमा घरमा आमा बाबु नभएको बेलामा एक १६ वर्षीया किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरी जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको हो।
आमा बुवा विवाहमा गएको मौका छोपी चार जना युवकले ती किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेका हुन् । घटनापछि ती युवतीका आमाबुवाले आफ्नी छोरी बलात्कृत भएको भन्दै गाउँका गन्यमान्यलाई गुनासो गरेपछि ती युवतीलाई जलाएर मारिएको प्रहरीलाई उदृत गर्दै बीबीसीले जानाएको छ।
ती युवती गत शुक्रबार सामुहिक बलात्कारमा परेकी थिइन्। बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले १५ जनालाई पक्राउ गरेको छ। बीबीसी समाचारमा जनाईए अनुसार सामुहिक बलात्कारमा परेकी युवतीलाई न्याय दिन भन्दै त्यहाँको ग्राम पन्चायतले पीडकले पिडितलाई ५० हजार रुपैयाँ दिन आदेश दिएको थियो। तर, पीडकहरुले पन्चायतको न्र्न्याले आफुहरुको ठूलो अपमान भएको भन्दै पीडितको घरमै गएर किशोरीलाई आगो लगाई जलाएर हत्या गरेका थिए ।
जिउँदै छोरी जलाई दिने ती हिंस्रकहरुले ती य्वातिका आमा बुवालाई समेत मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेका थिए। यो घटना भएको थाहा पाउने बित्तिकै पुगेको प्रहरीले युवतीको आधा जलेको शव नियन्त्रणमा लिएको थियो। उक्त घटनापछि पीडित परिवारले त्यहाँको स्थानीय प्रहरी चौकीमा पीडकविरुद्ध उजुरी दिएका छन् ।
तर, घटनाका मुक्य आरोपीहरु फरार रहेको हुँदा प्रहरीले उनीहरुको व्यापक खिजी गरिरहेको बताएको छ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, बैशाख २५, २०७५१६:४६
हेडफोनमा गीत सुन्नुहुन्छ ? सावधान ! करेन्ट लागेर एक महिलाको मृत्यु